Hogaaminayo Downlight, hogaaminayo Down Light, LEDka Downlight - iftiimeen
downlight gudaha iftiimeen dan ah oo ku saabsan nolosha dadka oo dhan ku wareegsan oo kala duwan dalalka. downlight Fire qiimeeyo dhigaysa nool ammaan. Janjeeri iyo xagal dogob variable downlight dejinta siin nalalka diiradda si jihada saxda ah. IP65 downlight hortagi karaa biyo iyo wax lays huurka badan. RA High iyo CRI aad nool more dhabta ah. iftiinka horuu Low ka dhigaysa caafimaad iftiinka. kharashka macquulka ah iyo taararka fudud aad biilka ka yar.
Dabka Rated.30min, 60min & 90min
CCT iyo Bezel laysku beddelid karo
IP65 & Janjeeri
Screwless & gooyn IN / xiriir KA
Variable Dejinta Ray xagal ka mid laambad
isbedelka CCT + Dim inay Diiri dhacna hal laambad
downlight ganacsi iftiimeen dhacaa laba safafka si loo daboolo baahida suuqa kala duwan - miisaaniyadda iyo Ingiriiska. rakiban Kuwanu waa bedelka designable ee CFL iyo PL iftiinka. Sababo la xiriira waqtiga dheer nalalka iyo degaanka gaar ah loo isticmaalo, downlight ganacsi iftiimeen siinayaa 5 sano damaanad iyo bixiyaan fursado shaqo dheeraad ah variable ka mid ah ilayska. Sidoo kale doorasho kala duwan optic siin karaan user doorashooyin badan ee design goobta iftiinka.
CCT isbedel ka mid laambad
fursadaha optic Multi (relector + gashto + diffusers)
Triac, Dali & fursadaha dimming 1-10v
downlight smart iftiimeen waxaa gacanta ku via APP isticmaalaya tiknoolajiga la yidhaa Bluetooth. Si loo sahlo in dadka walaac ka gacanta ku xanibayo ama maqan telefoonka, waxaan leenahay ku biiro derbiga u waafaqayaan. technology ugu dambeeyay awood our downlight smart more socon kara nidaamka dadka kale. ka gacanta laga reebo, shaqada awood laambadda waxaa laga abuuray. Waxay leedahay iftiin weyn iyo iftiin HALO oo dhar cadcad xidhan oo RGB oo ku haboon yahay codsiyada kala duwan. Iyada oo downlight smart iftiimeen, waxaad samayn kartaa joog laambad aad niyadda waqti kasta iyo meesha wax la taabto ee telefoonka ah.
iftiin weyn ee Independent iyo gacan ku haynta iftiin HALO
midabka Full iyo gacan ku haynta dhalaalka
Taabta facia xasaasi ah
Wireless Bluetooth digayaan in kooxda iftiin
Jaanqaadaan saarka D1 & C1 in la rakibo isku qasan
Laydhka iftiimeen kooxaha design iyo injineernimada xirfadeed Our abuuri karaan waxyaabaha habka awood in macaamiisha si ay u kala ka tartamaya iyo gaaro qiimaha ugu badan ee suuqyada degaanka. Our multi-luuqadood adeegga macaamiisha maamulayaasha shaqada si sax ah u fahmaan shuruudaha macaamiisha oo dhan iyo in la siiyo ka hor inta warshadaha keentay heerarka adeega, inta lagu guda jiro iyo ka dib markii heshiis dhamaystiran.
Qeybiye ODM Specialist ee LED Downlight Products
Cinwaankaaga: Jiatai Road West, Fenghuang Town, Zhangjiagang, Jiang su, Shiinaha